hahita ny fidirana ho any amin'ny toerana - Lahatsary Firesahana Amin'ny Tontolo
Ny fahombiazana tantara nanomboka tamin'ny taona, rehefa"Mampiaraka fifandraisana matotra", dia mbola tsy ny lehibe indrindra dia ny vavahadin-tserasera amin'ny ny tsara indrindra ara-teknika ny sehatra (mety ho nananika (voafaritra) misy loharano amin'ny Aterineto), dia lasa akaiky nahalala ny fampiasam-bola mitazona"Finam". Ny rafitra manomboka nanaiky fandoavam-bola amin'ny alalan'ny karatra avy amin'ny manerana izao tontolo izao
Izany dia mampitombo be ny vola miditra, sy ny sehatra hafa ny fandoavam-bola dia tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firafitry ny orinasa tombony tonga tany amin'ny faran'ny taona. ny fitambaran'ny vola miditra Ny vola miditra"Mampiaraka fifandraisana matotra"tamin'ny taona nahatratra ny tapitrisa dolara, izay ny mihoatra noho ny tamin'ny taona.
SOA. FINDAY vavahadin"ny lehibe Mampiaraka fifandraisana"efa nahazo vola mitentina tapitrisa, izany fitomboana tamin'ny taona dia. Isam-bolana ny finday loharano ampiasaina amin'ny saika arivo ireo mpandray anjara. Asehon'ny antontan'isa fa ny isan'ny mavitrika ireo mpampiasa (ny famangiana ny loharano, fara fahakeliny, indray mandeha isam-bolana) ho an'ny taona nitombo in. olona an'arivony isan-andro ny fitsidihana ny loharano momba ny arivo mpampiasa. Mpiara-miombon'antoka ny orinasa dia toy izany marika toy ny Google, Paoma. Taorian'ny"lehibe ny Fiarahana amin'ny fifandraisana"manova ny endrika sy ny maro mitsikera anatiny rafitra. Ny fanamiana rafitra Mampiaraka"Mampiaraka fifandraisana matotra"nahazo vaovao, famolavolana, ary niova ihany koa ny sasany fahafaha-miasa ny vavahadin-tserasera. Ny Fanompoana ankehitriny mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena ny interface tsara endrika sy marina kokoa ny mpampiasa namana. Niova ny fomba fiasa toy izany no ampahany manan-danja ny asa fitantanan-draharaha, ny hiadiana amin'ny fanaovana hosoka sy ny spam sy ny mpampiasa ny fanohanana. Nampahafantatra ny toerana misy ny"Tena misy,"manamafy ny zava-misy ny mombamomba ny tompony. Tamin'ny,"matotra ny Fiarahana amin'ny fifandraisana"dia efa voadika fiteny ary tonga ny tsena iraisam-pirenena. Ankehitriny, ny fiaraha-miasa tambajotra dia ahitana mihoatra ny. ireo toerana maneran-tany Ny volana janoary, ny isam-bolana ny mpanatrika ny finday fampiharana nanatona ny fotoan-dehibe ny, mpampiasa, sy ny finday toerana ho an'ny bokotra maoderina finday dia nihoatra ny ny mpisera isam-bolana. Isika dia miresaka momba ny finday toerana sy ny fampiharana ny Android sy IPhone marika,"Toerana ny fifandraisana sy ny Fiarahana","Mampiaraka fifandraisana lehibe". Ary izany no ihany ny fanombohan'ny ny tantara.
An-tapitrisany ny Alemà dia manirery - ireo no manelingelina HuffPost Alemaina
ry zalahy online hitsena anao video Niaraka tamin'ny zazavavy an-tserasera malalaka firaisana ara-nofo mivantana Mampiaraka Chatroulette hafa Fiarahana tsy misy sary maimaim-poana mampiaraka online ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny aterineto trandrahana ny lahatsary amin'ny chat taona amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy